“दीर्घकालमा अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन” - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
“दीर्घकालमा अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन”
Posted by Headline Nepal | १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १७:४६ |
१८ जेष्ठ, काठमाण्डौं । दक्षिण कोरियाको भावी राजदूत बन्न लागेका अमेरिकी नौसेनाबाट बाहिरिँदै गरेका एडमिरलले हालको दिनमा उत्तर कोरिया प्रशान्तिय क्षेत्रको शान्तिको सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको बताए । तर, उनका अनुसार दीर्घकालमा चीनको ‘हेजेमोनी(आधिपत्य स्थापना)को सपना’ वासिन्टनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।
बुधबार हवाई राज्यको पर्ल हार्वरमा यु.एस. प्यासिफिक कमाण्डको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने क्रार्यक्रम भएको थियो । त्यस कार्यक्रममा एडमिरल ह्यारी ह्यारिसले एडमिरल फिल डेभिडसनलाई अमेरिकी न्याभिको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । त्यही अबसरमा एडमिरल ह्यारिसले यो कुरा भनेका हुन् ।
सो समारोहमा उक्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य उपस्थीतिलाई भावी दिनमा ‘यु.एस.इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ मा नाम बदलिने घोषणा पनि गरियो ।
ह्यारिस अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा विस्तारित मानिने उक्त क्षेत्रमा तीन वर्ष नेतृत्वमा रहे । बिदाईको समयमा ह्यारिसले भनेका कुरा यस अघि पनि उनले पटक–पटक भन्दै आइरहेका थिए ।
“आजको दिनमा उत्तर कोरिया हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने मिसाइल र आणविक क्षमता भएको उत्तर कोरिया हाम्रा लागि किमार्थ स्वीकार्य हुदैन,” उनले भने ।
तथापी, उनले थपे “दीर्घकालमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन हो । अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्र र सहकर्मीहरुको एकाग्रपूर्ण सहभागिता र सम्बाद भएन भने चीनको एशियामा हेजेमोनी बन्ने सपना साकार हुनेछ ।”
बिहिबार ह्यारिसको टिप्पणीमा प्रतिक्रिया दिदैं चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुन्यीङ्गले भनिन्, “एडमाइललाई ‘हेजेमोनी’को भूतले सताएको देखिन्छ । किनकी उनलाई आफूले कायम गरेको ‘हेजेमोनी’ गुम्ला भन्ने डर छ ।”
“दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति चीन र अन्य तटीय राष्ट्रहरुको कुल सेनाको सङ्ख्याभन्दा निक्कै धेरै छ,” हुवाले अमेरिकाले आफूहरुलाई लगाएको सैन्यकरणको पनि विरोध गर्दै भनिन् “यो त चोरले ‘चोरी रोक’ भने जस्तै भयो ।”
पत्रकार भेटघाटको दैनिक कार्यक्रममा हुवाले दक्षिण चीन सागरमा चीनले संचालन गरिरहेको विकास कार्यक्रम र सेनाको तैनाथी आत्मरक्षाको लागि मात्र भएको बताइन् ।
ह्यारिसले यो टिप्पणी गर्दा अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स म्याटिस पनि सँगै उपस्थित थिए । उनी सिङ्गपुरमा हुन लागेको एक उच्च सुरक्षा मञ्चमा जादै गर्दा उक्त समारोहमा सहभागी हुनेको लागि हवाईमा रोकिएका हुन् । सिङ्गापुरमा हुने उक्त मञ्चमा म्याटिसले उत्तर कोरिया र दक्षिण चीन सागरको बारेमा छलफल गर्ने कार्यसुचि रहेको छ ।
हरिसको उत्तर कोरियासँग हुन लागेको अमेरिकाको शिखर बार्तामा पनि भूमिका हुने अनुमान गरिएको छ । यही कारण उनलाई अष्ट्रेलियाको लागि राजदुत बनाउन बारेमा गर्न लागिएको संसदीय सुनुवाई अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा हुने विश्वको सबैभन्दा ठूलो समून्द्री युद्ध अभ्यास ‘२०१८ रिम अफ प्यासिफिक सैन्य अभ्यास’मा अघिल्लो साता चीनलाई सहभागिताको लागि गरिएको निमन्त्रणाको स्थगन हुँदा पनि प्रशान्तीय कमाण्डको नेतृत्वमा ह्यारिसनै थिए । चीनले यो कदमप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।
बुधबारको कार्यक्रममा बोल्दै म्याटिसले भने, “जहाँ सक्छौं हामीले बेइजिङ्गसँग सहकार्य गर्नुपर्छ तर जहाँ आवश्यक पर्छ हामी भिड्न तयार छौं ।”
आफ्ना उत्तराधिकारीलाई हरिसले मस्कोमाथि पनि निगरानी राख्न साबधान गराए । रसियाले प्रशान्तीय क्षेत्रमा ‘विघ्नकारी भूमिका’ खेलिरहेको उनले बताए ।
“प्रशान्तीय क्षेत्रमा खुल्ला र दमानकारी विश्व व्यवस्था दृष्टीकोण राख्नेहरुबीच भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धा भईरहेको छ,” ह्यारिसले भने ।
“विश्वमा ठूला शक्तिहरुबीच प्रतिस्पर्धा पुनः शुचारु भएको छ । मेरो विश्वासमा हामी इतिहासको संकटपूर्ण विन्दूतर्फ बढ्दै छौं …स्वतन्त्रता र न्याय खतरा परेको छ ।” एजेन्सी
Previousकाँग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखे यस्तो चिठी !
Nextदुई कोरियाबीच मन्त्रीस्तर उच्चस्तरीय बैठक हुँदै
चलचित्र संगै राष्ट्रिय गित निर्देशनमा पनि व्यस्त निर्देशक गिरी !
१ आश्विन २०७५, सोमबार १९:४१
शिल्पा निर्माता रहने ‘मंगलम’को शुभसाइत, ७ गतेबाट छायांकन
३ माघ २०७३, सोमबार १७:२४
अस्पतालमा निःशुल्क वाइफाई विस्तार गर्न सूचनामन्त्रीको निर्देशन
२४ माघ २०७३, सोमबार १४:१२